नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): हत्या मुद्धामा अदालतद्वारा वारेन्ट जारी गरिएका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका अभियुक्त गुठी संस्थानका प्रमुख !
हत्या मुद्धामा अदालतद्वारा वारेन्ट जारी गरिएका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका अभियुक्त गुठी संस्थानका प्रमुख !
कथित "जनप्रिय" प्रधानमन्त्री बाबुराम कमरेडलाई हत्यारा र अपराधी नै प्यारो लागेपछी कसको के नै लाग्छ र !?
हत्या मुद्धामा अदालतद्वारा वारेन्ट जारी गरिएका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एक अभियुक्त सरकार मातहतकै एक संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख छन् । उनी हुन-गुठी संस्थानका प्रशासक एवं कार्यकारी प्रमुख बलिरामप्रसाद तेली शाह । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहले बलिरामलाई उक्त पदमा नियुत्त गरेका हुन् । हिन्दु युवासंघका तत्कालीन अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या अभियोगमा गत असोज २५ गते जिल्ला अदालत पर्सामा बलिरामविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको थियो । अदालतले असोज १३ गते बदिरामविरुद्ध वारेन्ट जारी गर्दै बरिलामलाइ पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । पर्साका प्रहरी प्रमुख रमेश खरेलले बलिराम फरार अभियुक्त भएकाले उनलाई पक्राउ गर्न मातहतका इकाई र काठमाडौँ प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको बताए ।
तर, बलिराम भने काठमाडौँको डिल्लीबजारमा रहेको गुडी संस्थानको कार्यलयमा दिनहुँ जान्छन् । बलिरामले मुद्धा दायर हुँदैमा सरकारी संस्थानमा काम गर्न कानुनले बन्दजे नलगाएको दाबी गरे ।